Kwimeko yokulahleka, yonke into efunekayo iyaqhubeka iphuma kumbisi, kodwa umzimba womama uphelile. Ukuze ugcine ukulinganiswa komzimba wezinto ozenzayo iziqhekeza ubisi lwebele, kufuneka uqinisekise ukuba ukutya okupheleleyo.
Ngomama ongumhlengikazi kufuneka:
1,200 g inyama, inkukhu okanye intlanzi;
2.350-500 iigrafu zemifuno (ii-litate ii-200 g);
3.250-300 g yeziqhamo;
4.200-250 g yokutya, okusanhlamvu, isinkwa esipheleleyo;
5.500-800 g yeemveliso zobisi ezivutyiweyo (kefir, yoghurt, ukhilimu omuncu);
6.120-170 g ye-kottage shizi kunye noshizi;
8.25 g ibhotela;
9.15 g yeoyile yemifuno (i-sunflower, ingqolowa, umnquma).
Imveliso ebalulekileyo ngexesha lokutya, kodwa ungathathi. Oogogo bethu bakholelwa ukuba xa unxilisa inyama, ubisi buba mncinane. Ezinye iintlobo ezahlukileyo: inyama yenkomo, i-fat fat-fat, ulwimi, inkukhu, i-turkey, umvundla. Ulungelelanisa kakhulu ukusilela kwesibindi senyama yesinyithi.
Umphefumlo ovela esibindi
0.5 kg yesibindi sesilwanyana
0.5 izindebe zobisi
50 g ukhilimu omuncu
Isibindi sidlulayo kwisiqwenga somzimba. ITyuwa kunye nepepper. I-shred iklabishi, i-anyanisi kunye neerotyyiti ezigayiweyo ukubeka phantsi kwesiqhekeza.
Ukubetha amaqanda ngobisi. Hlanganisa zonke izithako, faka i-soda kwisiphakamiso somsi, xuba kakuhle. Faka ifom yegrisi. Bhaka imizuzu engama-20 kwihovini kwi-180 ° C. Kungekudala ngaphambi kokulungele ukuthulula ukhilimu omuncu, bhaka enye enye imizuzu emihlanu.
Buyisela inyama kunye neentlanzi zaselwandle kunye nentlanzi ubuncinane 1-2 ngeeveki. Ukuba ulusu lube lukhuni kakhulu, yidla iintlanzi zaselwandle rhoqo ngangokunokwenzeka.
Intlanzi kunye nemifuno yemifuno
300 g ealmon fillets
Iifolishi ezingama-400 g nayiphi na inhlanzi emhlophe (i-cod, i-perch, i-pike ipaki)
Ithebhile ye-2, iipuni zeentlobo zezonka
100 ml ukhilimu
Itafile ezi-2, iipuni ze-starch
100 g iinqwelo, iinqwelo
100 g weembotyi eziluhlaza
Lungisa inyama enqabileyo. Kungcono ukuba ungaxubani inhlanzi ebomvu nelomhlophe, kodwa ujikeleze enye. Hlanganisa inyama ehlanjwe kwi-salmon ngeqanda elibethiwe, engeza 50 ml ye-cream kunye netafile e-1. isipuni sesonka kunye nesitashi. Ityuwa, faka isiqingatha se-bulb kunye nenxalenye yedill. Kuyafana ngokuphindaphindiweyo kunye nenyama egxothwe kwiintlanzi ezimhlophe. Lubhalise ifom ngeoli. Beka phantsi kwe-meat minced kwi-salmon, kwiibhontshisi eziphezulu. Isalathisi sesibini ngumhlaba osuka kwintlanzi emhlophe, ukusuka phezulu kwiinqathe. Ukugqiba yonke into ngoluhlu lweentlanzi ezigqithisiweyo. Lubricate phezulu ngeqanda. Bhaka kwi-40-45 imizuzu kwihovini kwi-175 ° C. Ngaphambi kokuba usebenze, ukuba unqwenela, uthele ijisi lemon okanye uhobise ngesunqa semon.
Groats, izitya zokutya
Umthombo ongcono kakhulu we-vitamine yeqela le-B, ukuxhasa inkqubo ye-nervous, kunye ne-PP-nicotinic acid, ejongene nomsebenzi wamathumbu. I-Buckwheat, i-oats, ingqolowa inciphisa ukukhathala ngenxa yobuninzi bamaminerali: i-potassium, i-phosphorus, i-magnesium. Kukholelwa ukuba i-millet ikhuthaza ukuveliswa kobisi, inqanda ukulahlekelwa kweenwele kumanesi.
4 iziglasi zobisi
1 indebe ye-millet
Itiye le-1/2. iipuniwe zetyuwa
Itafile e-3-4, iipuni zeeshukela
Ngendlela yokuthungela ubisi obandayo, ufefe i-millet, yongeza ityuwa, ushukela, ubeke kwi-ovini ngo-250 ° C, emva kokubilisa ukutshisa ukushisa kuma-100 ° C. Xa i-millet iphantse ibambe ubisi, yongeza iqanda elincinyiweyo, lifake iindwangu eziqhumayo phezu komhlaba we-casserole.
Kubaluleke kakhulu kwindlela ezi zinto zilungiselelwe ngayo. Ngokomzekelo, ukufumba imifuno kwioli eninzi ngaphambi kokuyizalisa kwisobho kwenza ukuba isidlo sibe ne-caloric engakumbi kwaye singabalulekanga. Utyando oluninzi lwexesha lokushisa lubonakalisa ezininzi iivithamini kwaye lunciphisa inani lezondlo zemifuno. Ngokuqhelekileyo badla iiladidi kwimifuno eluhlaza, iifom. Kwaye iipokethi zokutshiza izitya kufuneka zikhethwe ngokwemigaqo: elifutshane ixesha lokupheka, lingcono.
1-1.5 kg yamathanga
1 iglasi yekhilimu
pepper ukuba ulase
Iqungu liqhekeke (ungayinqumki i-peel), uthele amanzi abilayo uze upheke imizuzu eyi-15-20. Susa ekushiseni, ugaye kwi-blender, uthele kwi-ukhilimu, ityuwa, ipilisi. Unako ukongeza ngokuthe ngqo kwiingcezu zeenkukhu okanye ufefe ngamacroutons.
Ungabikho nje ubuninzi beivithamini, kodwa kunye neefayili ezinokutya eziyimfuneko ezifanelekileyo zokusebenza kwamathumbu. Kungcono ukhethe iziqhamo zonyaka ezikhulayo kwindawo yakho. Isiqhamo esingaqhelekanga, zama okufutshane emva kokuphendula komntwana.
Isiselo esilungileyo kumama onesihlengikazi ngamanzi acocekileyo okusela. Ufuna ukusela ngokulinganayo njengoko ufuna. Ukugqithisa okweqile, kuthunyelwa emzimbeni ngokusebenzisa amandla, okunokwenzeka, kuguqulwa ibe yimimiselo, kungekhona kwiindawo ezongezelelweyo zobisi. Kodwa musa ukulibazisa ukucima ukoma "ngenxa kamva." Ukuba ufuna ukusela, cima zonke iingxaki ezibalulekileyo, uyeke kwaye uphuze, ngaphandle koko umbane owenzela umveliso wobisi uya kufumaneka ngokutyhila kwamanye amaziko, umzekelo ... wesikhumba. Nangona iiyure ezimbini zokuphelelwa umdaka ngokwaneleyo, ukwenzela ukuba ebusweni bomama onomnakekeli babonakale iimbumba ezimhlophe: iimpuphu ezimhlophe ezenzekayo xa kunqongophala kokunyamezela kwesikhumba.
Iintlobo zemifuno yentsapho yamathanga
I-oksijeni yokugqoka kubhinqa abakhulelweyo
I-black black and green, lekisa: inzuzo kunye neyingozi
Indlela yokutya ngokufanelekileyo ukugcina ulutsha?
Ifantasti ichaphazela njani ingqondo yengqondo yomntwana?
UVasilisa Volodina: Indlela yokuwa nomntu, eyazi usuku lwakhe lokuzalwa
Isaladi kunye nenkukhu ethosiweyo kunye neerhasi
Virgo: i-horoscope yokuwa kwe-2013
I-recipe elula ye-chocolate nge-oven
Iipeya ezibhakiweyo nge-cottage cheese
Indlela yokukhetha ukunqunyulwa kweenwele ngomntu onjani: iingcebiso zengcali